Ozi CEO - Drotrong Chinese Herbs Biotech Co., Ltd.
Nabata ileta weebụsaịtị nke Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. Daalụ maka nlebara anya na nkwado gị. Ọ ga-amasị m igosipụta ekele m maka gị na ndị ọrụ ibe anyị.
Kemgbe 1995, Drotrong Chinese Herb Biotech Co., Ltd. etinyela aka na iwulite ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ niile nke ahịhịa ndị China, nke gụnyere ahịhịa ndị China, ịgha mkpụrụ, nhazi mbụ, nhazi miri emi, ịmịpụta ahịhịa na azụmaahịa. anyị na-mgbe niile-agbaso ụkpụrụ ”emepe enterprise, ifiọkde mmeri-mmeri imekọ ihe ọnụ, na-eme onyinye ka ọha mmadụ na ụmụ mmadụ”. Anyị na-etinye aka ịzụlite ụlọ ọrụ ọgwụ na ahịhịa ndị China anyị jiri akụrụngwa sayensị, ịdị uchu, ihe ọhụụ ma na-agbanwe agbanwe.
Ka ọ dị ugbu a, anyị na-enye ngwaahịa dị elu maka ụlọ ọrụ ọgwụ ndị ama ama, ndị na-emepụta ihe ịchọ mma, na ndị na-ewepụta ihe ọkụkụ na ụlọ na mba ofesi, ma merie ntụkwasị obi na otuto ndị ahịa anyị. Anyị maara otú e si ezute ahịa ahụ ma anyị nwere obi ike iji mee ezigbo ngwọta ma hụ na ngwọta anyị na-arụ ọrụ zuru oke, na-arụ ọrụ nke ọma ma na-agbanwe agbanwe n'oge niile.
N'ime afọ 25 gara aga, anyị na-ebukarị ibu ọrụ mmekọrịta anyị. Nke a bụ nhọrọ a na-apụghị izere ezere iji nweta mmepe mmepe. Anyị na-mgbe niile na-achụ elu àgwà ngwaahịa, elu uzu na ọkachamara talent. N'oge ọhụrụ, anyị ga-arụsi ọrụ ike inyocha ma gbanwee usoro azụmahịa, na-agbanwe agbanwe ma na-enwe ọganihu iji ghọta mmepe na-adigide. Anyị ga-enye onyinye anyị maka mmepe nke ụlọ ọrụ ọgwụ na ahụike nke ụmụ mmadụ.
A na m atụzi anya na ndị ahịa ọhụrụ anyị na ndị ochie, ka anyị kee ọdịnihu ka mma!